Qatar Airways 'Discover Qatar oo bilawday markabkii ugu horreeyay ee dalxiis
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » saaciday inay » Diyaaradda Qatar Airways 'Discover Qatar ayaa bilaabeysa markabkii ugu horreeyay ee dalxiis
Airlines • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • saaciday inay • Warshadaha Warshadaha • Wararka Raaxada • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Diyaaradda Qatar Airways 'Discover Qatar ayaa bilaabeysa markabkii ugu horreeyay ee dalxiis
Baro Qatar, oo ah hoosaad hoosaad maaraynta maareynta Qatar Airways, ayaa ku dhawaaqday inay soo bandhigtay safarkii ugu horreeyay ee dalxiis, kaas oo martida siin doona khibrad cabsi leh inta ay ku safrayaan raaxo iyo raaxo xeebta Qatar. Doomaha dalxiisyada, oo loogu talagalay dadka safarka ah iyo kuwa soo-jeedka leh, waxay bixiyaan fursad gaar ah oo ay ku eegaan isu imaatinka ugu ballaadhan ee kalluunka ugu nool adduunka - Kalluunka Whale - ee aagga badda ee Al Shaheen.
Whale Sharks, oo inta badan loo yaqaan 'Rafaaano jilicsan', waxaa lagu qiyaasaa inuu jiray 60 milyan oo sano. Waxay noolaan karaan ilaa 100 sano waxayna kori karaan ilaa 12 mitir oo dherer ah - qiyaas ahaan cabirka baska weyn ee dugsiga. Inta udhaxeysa bilaha xagaaga ee Abriil iyo Sebtembar, inta lagu guda jiro socdaalkooda sanadlaha ah ee gobolka, Whale Sharks waxaa laga helaa iyagoo boqolaal koox ah quudinaya aagga badda ee Al Shaheen ee ku teedsan Gacanka Carbeed, kaas oo 80 kiiloomitir u jirta xeebta woqooyi ee Qatar.
Safarka safarka ee Discover Qatar wuxuu siin doonaa rakaabka mudnaanta helitaanka aagga xaddidan ee Al Shaheen - nidaam deegaan oo kala duwan oo qurux badan oo dabiici ah - si ay goob joog uga ahaato haybadda isu imaatinka Whale Shark, iyo sidoo kale xiisaha gaarka ah ee sahaminta xeebta. Laga soo bilaabo indha indheynta Whale Sharks, quusitaanka dhuxusha, sahaminta mangroves illaa dhex qulqulaya biyaha qulqulaya ee kanaalka Khor Al Adaid, koox ka kooban hageyaal khabiir ah, aqoonyahano ku xeel dheer cilmiga badda, dabiici yaqaanka iyo ornithologists ayaa u horseedi doona martida inay aqoonsadaan duurjoogta maxalliga ah, waxay bixiyaan aragti dhaqameed goobaha sahaminta iyo hubinta khibrad safar lama ilaawaan ah.
Madaxa Fulinta ee Qatar Airways Group, Mudane Mr. Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Qatar waa goob gaar u ah safarada dalxiisyada waxaanan si aad ah ugu faraxsanahay inaan soo bandhigno wax soo saarkii ugu horreeyay ee aaggan ah si aan adduunka ugu tusno quruxda dalkeenna. Qatar, iyada oo ay ku badan tahay dabeecado adag, oo aan la taaban karin, oo ay ku hareereysan yihiin biyo aad u qurux badan iyo bey'adeed u gaar ah noolaha, waxay bixisaa dhacdooyin xiiso leh oo u oggolaada booqdayaasha in ay la xiriiraan dabeecadda oo ay booqdaan meelaha Qatar ee kaliya marinka u ah badda. Sidoo kale, martidayadu waxay heli doonaan fursad aan horay loo arag oo ay ku indha indheeyaan isu imaatinka ugu weyn ee kalluunka ugu weyn adduunka - Kalluumeysiga Nibiriga. ”
Discover Qatar waxay u fidisaa macaamiisheeda sideed habeen, sagaal maalmood xirmo safar dalxiis oo saaran markab safar raaxo leh oo ku saleysan guddi buuxa. Martidu waxay ku raaxeysan doonaan adeegyo shan-xiddigle ah, hoy aad u qurxoon, daah-fur indho-indheyn iyo sahaminno sahminta halka shaqaalahan aadka u tababaran ay xaqiijin doonaan safarka aaminka ah ee raaxada iyo qaabka. Macaamiisha ayaa sidoo kale fursad u heli doona inay ku kordhiyaan safarkooda toban-habeen, kow iyo toban maalmood xirmo, oo ay ku jiraan seddex habeen oo ay joogaan Doha, si ay u sahamiyaan hidaha iyo dhaqanka magaalada, u booqdaan meelaha soo jiidashada leh iyo astaamaha, iyo sidoo kale inay ku raaxaystaan ganacsi midab leh iyo dalabyo cunto karin ah oo ka socda Soley Waqif jidadkeeda firfircoon.
Discover Qatar waxay iskaashi la yeelatay PONANT si ay u bixiso taxanahan dalxiis. Martidu waxay ku safri doonaan 'Le Champlain', oo ah mid ka mid ah maraakiibta dalxiiska fasalka cusub ee PONANT, oo leh astaamo cusub, qaab casri ah iyo tikniyoolajiyad heer sare ah. Markabkan cajiibka ah wuxuu uqaataa bilic ahaan iyo fasal badaha oo bixiya 92 qol oo heer qaran oo raaxo leh iyo qolal ku qalabeysan agabyo heer sare ah, 24-saac adeega khamriga, laba maqaaxiyo iyo dalxiis heer sare ah. Macaamiisha ayaa sidoo kale ku raaxeysan doona barkad aan xad lahayn iyo qol hoostiisa hoostiisa ah oo leh dareemo badan oo dareen leh oo leh dariishado waaweyn oo indha indheyn ah oo ka hooseeya khadka biyaha. Barxad Haydarooliga ayaa sahli doonta ka degidda iyo bilaabidda markay martidu ka qeybgalayaan safarada.